Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Jamaica » I-Jamaica izosayina i-MOU Entsha Yezokuthuthukiswa Kwezokuvakasha ne-Spain
UNgqongqoshe Wezokuvakasha, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett (kwesobunxele) uxoxa noNgqongqoshe Wezimboni, Wezohwebo, Nezokuvakasha waseSpain, uMhlonishwa. U-Reyes Maroto, e-FITUR, umbukiso wokuhweba waminyaka yonke obaluleke kakhulu wokuvakasha wamazwe ngamazwe, manje oqhubekayo eMadrid, eSpain. Umhlangano uphumele esivumelwaneni sokwenza imemorandamu yokusebenzisana emikhakheni eyahlukene yokuthuthukisa ezokuvakasha. - Isithombe sihlonishwa nguMnyango Wezokuvakasha wase-Jamaica
UNgqongqoshe Wezokuvakasha wase-Jamaica, uMhlonishwa. Edmund Bartlett, umemezele ukuthi iJamaica neSpain bazokwakha isivumelwano sokusebenzisana ukuze basebenzisane emikhakheni eyahlukene yokuthuthukisa ezokuvakasha kanye noguquko lomnotho.
Lesi simemezelo silandela umhlangano noNgqongqoshe Wezimboni, Wezohwebo, Nezokuvakasha waseSpain, uMhlonishwa. U-Reyes Maroto, ekuqaleni kwanamuhla e-FITUR, umbukiso waminyaka yonke obaluleke kakhulu wohwebo lokuhamba nezokuvakasha emhlabeni, manje oqhubekayo eMadrid, eSpain. Ngaphezu kwe-Dominican Republic, okuyi-FITUR Partner Country yalo nyaka, i-FITUR ihlanganisa cishe amazwe ayikhulu anezethulo ezisemthethweni ezingamashumi ayisikhombisa.
“Ngijabule kakhulu ukumemezela lokho Jamaica kanye neSpain izothuthukisa imemorandamu yokusebenzisana emikhakheni ehlukahlukene yokuthuthukisa ezokuvakasha. Mina noNgqongqoshe uMorato namuhla sibe nezingxoxo ezibanzi mayelana nezindawo ezahlukene zokusimama kanye nokucatshangelwa kabusha kwezokuvakasha njengento ethuthukisa umnotho noguquko,” kusho uBartlett.
“Sixoxisane ngeqhaza leNhlangano Yezizwe Ezihlangene Yezokuvakasha njengesikhungo esibalulekile sokuthola izicelo zokufunda nezingokoqobo ezidingekayo ukuze kuthuthukiswe kabusha ezokuvakasha ezizokwenza amazwe amancane nabadlali abancane nabasezingeni eliphakathi babe nolwazi olulinganayo futhi balulame. imali eningi elahlekile,” engeza.
UJamaica ungumbungazi ovelele.
U-Bartlett uphinde wasebenzisa leli thuba ukumema uNgqongqoshe uMorato osukwini lokuqala ngqa lwe-Global Tourism Resilience Day lwase-Jamaica, oluhlelelwe uFebhuwari 17, 2022, embukisweni womhlaba e-Dubai. Lolu suku luzogxila emandleni amazwe okwakha ikhono lokuphendula ukushaqeka kwamazwe ngamazwe kanye nomhlaba wonke futhi akwazi ukubikezela ngokuqiniseka okukhulu izimpendulo zawo. Izosiza futhi amazwe ekuqondeni nasekunciphiseni imiphumela yalokhu kushaqeka ekuthuthukisweni kwawo, kodwa okubaluleke kakhulu, kuzowasiza ukuthi alawule futhi alulame ngokushesha ngemva kwalokhu kushaqeka.
“IJamaica ingumholi womcabango ngempela kule ndawo, futhi sizibophezele ekusebenzisaneni nabo bonke esibambisene nabo ukuze sakhe umhlaba oqinile, osebenza kahle kakhulu futhi oqinile ongasabela kangcono ekushaqisweni okuzokwenzeka njengoba siqhubeka nalolu hambo lwempilo, ” kuzwakalisa uBartlett.
Jamaica Inhlangano khono eliphawulekayo Spa Spain Ezokuvakasha izizwe Ezihlangene Inhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba
I-New Breakthrough Therapy ye-Idiopathic Pulmonary...
Siyini isakhiwo esisebenzayo seParabolic SAR?
Ezokuvakasha e-UAE zikhanya ngaphansi koMbusi omusha, Wakhe...
Isigaba Esisha Esivivinyweni Somtholampilo Se-Knee Osteoarthritis...
I-IGLTA yakha iqembu elisha labeluleki bomhlaba wonke ngobulili...